Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. देशभर तरकारीको भाउ आकाशियो, प्याजको मूल्य अहिले सम्म कै उच्च – Emountain TV
देशभर तरकारीको भाउ आकाशियो, प्याजको मूल्य अहिले सम्म कै उच्च
काठमाडौं, १६ मंसिर । पछिल्लो केही महिना यता तरकारीको बढ्दो मूल्यले नेपालीहरु आजित भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका लगायत विराटनगर र देशका अधिकासं सहरहरुमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । तरकारीमध्ये पनि प्याजको मूल्य अहिले सम्म कै उच्च भएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
विराटनगर स्थित गुन्द्री बजार प्रदेश १ कै होलसेल बजारमा पुर्वी नेपालका इटहरी, धनकुटा, इलाम, पाँचथर लगायतका जिल्लाबाट तरकारी बेच्न तथा खरिद गर्न आउने गर्दछन् । अहिले यहाँ आउने ग्राहकहरु सबैको एउटै गुनासो छ, तरकारी एकदम महगोँ भएको छ । तरकारीको महगाँइले उपभोक्ताहरु आजित भएका छन् ।
तरकारीमा पनि प्याजको मूल्य दोब्बर भन्दा बढी महंगो भएको छ । बजारमा प्याजको मूल्य आकशिएपछि यसको असर भन्सामा परेको छ । किसानले दिने थोक मूल्य र उपभोक्ता मूल्यमा झन्डै दोब्बर महँगो भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले कदम चाल्नु पर्ने कपिलवस्तुका उपभोक्ताहरुको भनाई छ ।
यता कपिलवस्तु कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत रामगोविन्द आर्यले भारतबाट प्याजको आयातमा कमी भएकाले प्याजको मूल्य दोब्बर भन्दा बढी महँगिएको बताउनुभयो ।
तरकारी मूल्य आकाशिएपछि शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकासं नेपालीहरुलाई भान्सा सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । नेपालमा प्याज लगायत सबै तरकारीको उत्पादन भने न्युन रहेको छ । भारतले प्याज निर्यात रोकेसँगै बढेको प्याजको मूल्यले नेपालीहरुलाई एउटा गतिलो पाठ भने सिकाएको छ ।कृषि पेशा त्यागेर चाउचाउको पारखी बनेका नेपालीहरुलाई तरकारी उत्पादन गर्न प्रेरित भने गरेको विज्ञहरुको भनाई छ ।